Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee London oo kaqeybgashay kulamo Xuquuqul Insaan oo loga hadlayo Palestine
Jaaliyada Ogadeniya ee London oo kaqeybgashay kulamo Xuquuqul Insaan oo loga hadlayo Palestine
Jaaliyada Ogadeniya ee UK oo ka qeyb gashay kulan weyn oo jaaliyada Falasdiin soo qaban qaabisay. Kulankan oo kadhacay London ayaa xubnihii jaaliyada uga qeybgalay waxaa kamid ahaa Xildhibaan Daahir Tamuuje iyo Halgame Xuseen Geele gudoomiyihii hore ee Jaaliyada London iyo Mudane Maxamed Cabdi (Gacmadheere) gudomiyaha xidhiidhka Bariga Dhexe. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay Palestinian Return Centre. (PRC) waxuuna dhacay 23.10.2013.
Shirkan Looga hadlayay Arrimaha Xuquuql Insaanka ee Wadanka Falasdiin (Palestine) ayaa waxaa marti sharaf ka ahaa oo ka hadlay Madax sare oo kasoo shaqeeyay Qaramada Midoobay oo uu kamid yahay Professor Richard A Falk iyo Wasiirki hore International Department MP Claire Short iyo MP Jeremy Corbyn.
Shirkan oo socday muddo 4 saacadood ah ayaa saacadi hore waxaa uu ahaa Qudbado ay soo jeediyeen masuuliyiintaas kor aan kuxusnay, kadibna waxaa laguda galay casho sharaf loo diyaariyay martida kasoo qeybgashay shirka. Mudadaas kadib waxaa laguda galay in si saaxiibtinimo ah loowada hadlo oo gooni gooni la isuwareysto.
Xildhibaan Daahir, Gudomiyihi hore ee Jaaliyada London Xuseen Geele, iyo gudomiyaha Arrimaha Bariga dhexe ee JWXO Mudane Maxamed Cabdi Gacmadheere ayaa si gooni gooni ah ula kulmay dad ay kamidyihiin Professor Richard folk, wasiirki hore wadankan Ingiriiska Claire Short iyo Geremy Corbyn. Ambasadorka Falasdiin Dr Manuel Hassassian iyo xubno badan oo kale oo kamid ah siyaasiyiinta iyo jaaliyada Palestine ee wadankan UK.
Waxayna si hoose uga wada hadleen Qadiyada Ogadeniya. Martisharaftan ka qeyb gashay kulankan ayaa sheegay inay si buuxda uga warhayaan qadiyada Ogadeniya walibana labada qadiyadood ay yihiin kuwo aad isugu dhow. Waxa ay kukala gadisan yihiin oo kaliya in Ogadeniya ay tahay dhul dhul Afrikan guumeysto midaas oo naxdin gooni ah leh. Sidoo kale waxay sheegeen in Qadiyada Ogadeniya ay kaxanuun badan tahay mida Palestine marka meelo badan laga eego islamarkaasna ay mudantahay in caalamku usoo jeedsado.
Jaaliyada Ogadeniya ayaa lafilaya inay wadashaqeyn layeelato jaaliyadaha iyo Ururada bulshada ee kasoo jeeda Falasdiin (Palestine) iyada oo ay jiri doonaan kulamo dhowaan dhici doona.
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa olole waayadanba waday ay kula saaxiibayso jaaliyadaha kale ee kasoo jeeda Dunida Islaamka, Jaaliyada ayaa xidhiidh joogta ah la leh Jaaliyadaha kasoo jeeda Wadanka Turkey.
Jaaliyada Ogadeniya ayaa hada wada Ruwaayad weyn oo ay soo qabanqaabinayso jaaliyadu gaar ahaan Ururka OYSU UK. ruwayaadaas oo lafilayo inay kasoo qeybgalaan saxiibada jaaliyadu sameysay waqtiyadii danbe.